Sunday December 17, 2017 - 14:04:05 in Wararka Gudaha by Nocsom Editor
Furitaanka tababarkan waxaa kasoo qeyb galay masuuliyiin ka socotay wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha, madaxda guddiga olombikada Soomaaliyeed, xubno ka socday xiriirada isboortiga ee dalka ka jira, qubaro isboorti iyo marti sharaf kale.
Lataliyaha Guddoomiye Ahan Xogihyihii ug horeeyay ee GOS Maxamed Xuseen Haadi iyo Guddoomiye sharafeedka GOS Cabdulqaadir Ibraahin Gacal Abkow oo xafladda furitanaka ka hadlay ayaa tilmaamay in aqoonta isbortiga oo sare loo qaadaa ay muhiimad gaar ah u leedahay horumarinta isboortiga dalka, waxayna ka qeyb galayasha kula dardaarmeen in ay ka faa’iideystaan koorsadan ugna faa’iideeyaan jiilka ka dambeeya.
Guddoomiyaha GOS Mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi oo goobta ka hadlay ayaa tilmamay in Tabarkan uu ka mid ah qorshaha GOS ee horumarinta aqoonta masuulyiinta isboortiga dalka, dhallinyarda jecel in ay ka qeyb qaataansare u qaadida isboortiga dalka.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in GOS ay ka go’an tahay in aysare u qaado aqoonta qeybaha kale gedisan ee isboortiga, waxuuuna ka qeyb galayaasha kula dardaarmay ka faa’iideystaan koorsann muhiimada weyn ku fadhida.
Gebogabadii waxaa goobtaka hadlay koorsadana furay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinuyarda iyo Isboortiga , Isaaq Xaashi Jimcaale ayaa sheegay in tababarkan uu wax weyn ka badali doono hanaanka horumarinta Isboortiga dalka, waxuuna ammaan ballaaran usoo jeediyey.
Agaasimaha ayaa dhanka kale tilmamay in tababarkan ay qabaneso GOS oo gacan ka heleysa Olympic Solidarity basle loo baahan yahay in la helo tababar soomaaliya ay qabaneyso soomaaliyana ay maal gelineyso wasaaraduna kaalinteeda ay ka qaadan doonto.
Tababarkan oo ay ka qeyb qaadanayaan 24 qof oo ka socda xiriirada, ururuada iyo ardayda jaamcadaha dalka ayaa socon doona muddo hal sano ah waxaana lagu baran doona.
Hannanka maamulka wanaagsaan , maaliyadda, Suuqgeynta qorsheynta, abaabulida tartamada, shuruucda iyo hogaan wanaagga, waana markii labaad ee GOS u qabato masuuliyiinta qeybaha kale gedisan ee isboortiga dalka.